धितोपत्र बजारमा थपिए छ कम्पनी, हेर्नुस कुन कम्पनीको कति कित्ता सेयर ! - Dainikee News::
धितोपत्र बजारमा थपिए छ कम्पनी, हेर्नुस कुन कम्पनीको कति कित्ता सेयर !
काठमाडौ, कात्तिक १० ।
धितोपत्र बजारमा यस साता विभिन्न छ कम्पनीका ९७ लाख ११ हजार ७२२ कित्ता शेयर सूचीकृत भएका छन् ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार विभिन्न वित्तीय संस्थाको लाभान्स र हकप्रद शेयर बजारमा सूचीकृत भएको हो । स्टकका अनुसार गण्डकी विकास बैंकको सबैभन्दा बढी ४४ लाख ५० हजार ९२२ कित्ता लाभान्स शेयर सूचीकृत भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को नाफाको आधारमा सो बैंकले शेयरधनीलाई लाभान्स शेयर दिएको हो ।
प्रभु इन्सुरेन्स कम्पनीको पनि ३१ लाख ६६ हजार ६७७ कित्ता हकप्रद सेयर सूचीकृत भएको छ । स्टकका अनुसार समिट लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आठ हजार ४४० कित्ता हकप्रद शेयर यसै साता सूचीकृत भएको हो । यस्तै अर्को इन्स्योरेन्स कम्पनी सूर्या लाइफको पनि १२ लाख १२ हजार ७५० कित्ता लाभान्स शेयर सूचीकृत भएको छ
पोखरा फाइनान्सको छ लाख २२ हजार ९३३ कित्ता र समिट लघुवित्त वित्तीय संस्थाकै दुई लाख ५० हजार कित्ता लाभान्स शेयर सूचीकृत भएका छन् । यही कात्तिक ४ गते एक हजार २४६ दशमलव ५२ बिन्दुमा रहेको कारोवार मापक नेप्से परिसूचक कारोवारको अन्तिम दिन कात्तिक ८ गते एक हजार २४१ दशमलब ११ बिन्दुमा पुगेको छ । यस्तै साताको पहिलो दिन क वर्गका कम्पनीको कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक २६५ दशमलव २८ बिन्दुमा रहेकामा अन्तिम दिन घटेर २६४ दशमलव शून्य एक बिन्दुमा पुगेको छ । रासस
प्रकाशित मिति: शनिबार, कार्तिक १०, २०७५ /Saturday, October 27th, 2018, 3:28 pm